Lioka 7 - Ny Baiboly
Lioka toko 7
Ny ankizilahin'ilay kapiteny - Ny zanakalahin'ilay mpitondratena tany Naima - Ny mpianatr'i Joany tany amin'i Jesoa - Ilay vehivavy mpanota tao an-tranon'i Simona Farisiana.
1Rahefa tapitra nampandre ny vahoaka izany toriteniny rehetra izany Jesoa, dia niditra tao Kafarnaoma. 2Ary nisy kapiteny anankiray nanana ankizilahy tiany tokoa, narary efa ho faty. 3Nony nahare ny amin'i Jesoa ilay kapiteny, dia naniraka loholon'ny Jody ho any aminy mba hangataka azy ho avy hanasitrana ilay ankizilahiny. 4Ary rahefa tonga tany amin'i Jesoa izy ireo, dia nangataka mafy taminy ka nanao hoe: Mendrika hanaovanao izany izy, 5fa sady tia ny firenentsika no nanao ny sinagogantsika aza. 6Dia niara-nandeha tamin'izy ireo Jesoa. Fa nony mby teo akaikin'ny trano izy, dia nampaniraka ny sasantsasany tamin'ny sakaizany ilay kapiteny hilaza aminy hoe: Tompo ô, aza dia misahirana toy izao re, fa tsy mendrika hidiranao ao ambanin'ny tafon-tranoko akory aho; 7ary na dia ny tenako aza dia noheveriko ho tsy mendrika hanatona anao akory, fa manonòna teny iray monja, dia ho sitrana ny ankiziko 8Fa izaho olona manan-dehibe mba mifehy miaramila koa, ka ny anankiray ilazako hoe: Mandehana, dia mandeha; ny anankiray ataoko hoe: Avia, dia avy; ary ny mpanompoko koa hoe: Ataovy izany, dia manao izy. 9Gaga Jesoa nony nandre izany, ka nitodika ny vahoaka nanaraka azy nanao hoe: Lazaiko marina aminareo fa tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany aho, na dia tamin'Israely aza. 10Ary nony tafaverina tao an-tranon'ilay kapiteny ireo iraka, dia nahita fa sitrana ilay ankizilahy narary.
11Taorian'izany, dia nankany amin'ny tanàna anankiray atao hoe Naima izy, ary mpianany maro sy vahoaka betsaka no niaraka taminy. 12Rahefa mby teo akaikin'ny vavahadin'ny tanàna izy, dia indro nisy fatin'ny zazalahy anankiray nentina halevina, zanak'olona lahy tokana sady mpitondratena indray reniny, ka vahoaka be avy ao an-tanàna no nanaraka azy. 13Nangoraka ny Tompo nony nahita an-dravehivavy, ka nanao taminy hoe: Aza mitomany. 14Ary nanatona izy ka nanendry ny tranovorona; dia nijanona ny mpilanja, ary hoy Jesoa: Ry zatovo, izaho mandidy anao, mitsangàna. 15Dia niarina niaraka tamin'izay ny maty, sady niteny, ary nomen'i Jesoa an-dreniny. 16Raiki-tahotra avokoa izay rehetra teo, sady nankalaza an'Andriamanitra nanao hoe: Mpaminany lehibe no efa niseho eto amintsika, ary Andriamanitra efa namangy ny olony. 17Dia niely eran'i Jodea sy ny tany manodidina rehetra izany teny fankalazana azy izany.
18Nambaran'ny mpianatr'i Joany taminy izany rehetra izany, 19ka dia niantso roa lahy tamin'izy ireo izy nalefany ho any amin'i Jesoa hanao aminy hoe: Hianao va no ilay ho avy, sa mbola hafa no handrasantsika? 20Nony tonga tany aminy ireo dia nanao hoe: Nirahin'i Joany Batista hankaty aminao izahay hanontany raha hianao no ilay ho avy, na mbola hafa no handrasantsika? 21Tamin'izay indrindra Jesoa dia nanasitrana olona maro niferinaina tamin'ny aretina sy ny rofy ary ny fanahy ratsy, sady nampahiratra jamba maro koa, 22ka izao no navaliny an'ireto iraka: Mandehana lazao amin'i Joany izay zavatra renareo sy hitanareo: mahiratra ny jamba, mandeha ny mandringa, madio ny boka, malady ny marenina, mitsangan-ko velona ny maty, torìna amin'ny mahantra ny Evanjely, 23ary sambatra izay rehetra tsy tafintohina noho ny amiko.
24Nony lasa ny irak'i Joany, dia nambaran'i Jesoa tamin'ny vahoaka ny aminy ka hoy izy: Hizaha inona no nalehanareo tany an'efitra? Volotara hozongozonin'ny rivotra va? 25Sa hizaha inona no nalehanareo tany? Lehilahy tsara fitafiana va? Raha izay tsara fitafiana sy manao fiainana, dia any an-tranon'ny mpanjaka no itoerany. 26Sa hizaha inona no nalehanareo tany? Mpaminany va? Eny, hoy izaho aminareo, ary ambony noho ny mpaminany aza. 27Fa izy no ilay voasoratra hoe: Indro aho maniraka ny anjeliko eo anoloanao mba hamboatra làlana eo alohanao. 28Koa lazaiko aminareo fa amin'izay natera-behivavy tsy misy mpaminany lehibe noho Joany Batista; nefa izay kely indrindra amin'ny fanjakan'Andriamanitra no lehibe noho izy. 29Ary ny vahoaka rehetra izay nandre azy mbamin'ny poblikàna aza dia nanamarina an'Andriamanitra, tamin'ny nandraisany ny batemin'i Joany; 30fa ny Farisiana sy ny mpampiana-dalàna kosa nanatsinontsinona ny fikasan'Andriamanitra ny aminy, tamin'ny nandavany ny batemin'i Joany.
31Ary hoy ny Tompo: Hohariko amin'iza re ny olona amin'ity taranaka ity, ary tahaka an'iza izy? 32Tahaka ny ankizy mipetraka eny an-kianja izy, izay mifampilaza hoe: Nitsoka sodina izahay, fa tsy nandihy hianareo; nanao hira izahay mampalahelo izahay, nefa tsy nitomany hianareo. 33Fa tonga Joany Batista tsy nihinana mofo na nisotro divay, lazainareo hoe: Azon'ny demony izy. 34Tonga indray ny Zanak'olona mihinana sy misotro, ataonareo hoe: Lehilahy tendan-kanina sy mpisotro io, sady sakaizan'ny poblikàna sy ny olon-dratsy fiaina. 35Fa ny Fahendrena efa nohamarinin'ny zanany rehetra.
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0787 seconds